Xubnaha Gobolada Waqooyi ee taageersan Farmaajo oo shir taageero ku qabsaday Muqdisho - Home somali news leader
Home NEWS Xubnaha Gobolada Waqooyi ee taageersan Farmaajo oo shir taageero ku qabsaday Muqdisho
Xubnaha Gobolada Waqooyi ee taageersan Farmaajo oo shir taageero ku qabsaday Muqdisho
Waxaa maanta Muqdisho ka dhacay shir ay isugu yimaadeen Xubnaha ka soo jeeda Gobolada Waqooyi, waxaana shirkan lagu taageerayay Guddiyada Doorashooyinka Soomaaliya ee lagu muransan yahay.
Shirka oo ay soo agaasimeen xubnaha ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ee taageersan Xukuumadda ayaa waxaa ka qeyb galay hormuud u ahaa Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Mahdi Guuleed, Xildhibaanada labada gole, Wasiiro, Salaadiin, Haween iyo Dhalinyaro.
Xubnahan ayaa si wada jir ah waxay u cadeeyeen mowqifkooda Doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay u taageersan yihiin guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay.
Xildhibaan Caasho Koos oo tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegtay inay taageersan yihiin Guddiga Xukuumadda magacawday.
Sidoo kale waxaa xubnihii shirka ka hadlay ka mid ahaa Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe, Wasiiru dowlaha gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa iyo Wasiirka Maaliyadda C/Raxmaan Ducaale Beyle oo qeyb ka ahaa shirka ayaa dhinacooda waxay sheegeen taageerada ay u hayaan Guddiga Xukuumadda magacawday.
Ra’iisul Wasaare ku xigheenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo soo xiray shirka wadatashiga arrimaha doorashada Gobolada Waqooyi Somaliland ayaa is dul taagya arrimo ay ka mid yihiin xaaladda kala guurka ee dalka uu maraayo iyo doorashooyinka xubnaha gobolada waqooyi, waxaana uu si kulul u weeraray Xubnaha mucaaradka.
Ugu dambeyn dhammaan xubnihii ka qeyb galay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka gobolada waqooyi (Somaliland) ayaa isku raacay in dalka uu doorasho aadayo iyaguna ay si buuxdo u taageersan yihiin guddiyadii dooorashooyinka ay xukuumadu magacowday.
Previous articleSudden death penalty gives England England Cup victory over France
Next articleDowlada Soomaaliya oo dooneysa in ilaalinta xeebaha Soomaaliya lagu wareejiyo ciidamada Badda Soomaaliya